Ugqirha wotyando 4, oyena mntu uhlekisayo wesimulator | IPhone iindaba
Ugqirha wotyando 4, isitayile esimangalisayo sokuhlinzwa
Sithatha olunye ukhenketho lweVenkile ye App ye-iOS ukubona ukuba yeyiphi imidlalo kunye nokusetyenziswa kweyona fashoni imnandi mva nje, kwaye sifumene ugqirha we-Amateur 4, ufakelo olutsha lwe-saga ebikade ikwiVenkile yeApple ixesha elide. Kolu hlelo lwesine sifumana umxholo we-funnier, amanqanaba amatsha, abalinganiswa kunye nezixhobo, ngale ndlela, unokuba nexesha elimnandi lokusebenza ngentliziyo evulekileyo, ukuba, ngezixhobo ezisisiseko, abasiki bepitsa kunye neefolokhwe ziya kuba zezinye izixhobo esiza kuthi sincede ngazo "ukusindisa" ubomi bezigulana zethu. Izandla zogqirha zizandla zakho, ubuchwephesha yinxalenye yalo mdlalo omnandi ongacetyiswayo kubantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinambini ubudala.
Yile ndlela [ukudada kwabantu abadala], inkampani yonjiniyela, eyithi thaca kuthi:
Sebenza ngaphezulu kwezigulana ezili-100 ezinezixhobo ezenziwe ekhaya kwi-Amateur Surgeon: Ukuhlaziywa kwakhona!
Thatha i-pizza cutter yakho kwaye usebenze!
Ugqirha Ignacio de Sangrado, uvulindlela wotyando olungalungiswanga, ubuya ekufeni Mncede asombulule imfihlelo yokuvuka kwakhe ngesiquphe xa ehamba emhlabeni ekhangela iimpendulo, esindisa ubomi babambalwa abakho zingqondweni kwinkqubo.
Umdlalo uthatha ungaphantsi kwe-117MB, emnandi. Inyani yile yokuba iyahlekisa, ungazenzi ngathi ufunda iyeza elisisiseko kunye naye, lenziwe kwaye lisenze sincume, ukuba asibuthathaka kakhulu egazini, kunjalo. Ngaphandle kokuya ngaphezulu, kuba ngasemva [ukudada kwabantu abadala] sineNethiwekhi yeKhathuni. Ifumana amanqaku amahle kwiVenkile yeApp ye-iOS eyibeke phakathi kwempumelelo yokukhuphela, simahla kodwa ngokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Iya kuhambelana naso nasiphi na isixhobo se-iOS ngaphezulu kwe-iOS 7.1 ukuze ukuhambelana kuphezulu, ikwanamanqanaba afunyenwe kwakhona kwizitolimende zangaphambili zomdlalo ofanayo Masisebenze manene!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » Ugqirha wotyando 4, isitayile esimangalisayo sokuhlinzwa
Ndiyazi ukuba bekuphantse kwiminyaka emi-3 okoko kwapapashwa kodwa ngoku bendijonge kwivenkile yeapp yomdlalo kwaye kubonakala ngathi ayifumaneki kwingingqi yam. Ngaba ikhona into oyaziyo?
Ikhamera ye-iPhone ithatha i-8 kwezona ndawo zili-10 zokusebenzisa kwiFlickr